newspaper and idea: ဒီလိုလေးဆိုအဆင်ပြေမလား ?
Monday, August 20, 2007 by KO WAI
On August 20, 2007 at 2:44 PM MELODYMAUNG said...
ဘာမှ အားကိုးပြီး လာရှင်းပြနဲ့ စခန်းရောက်မှ ရှင်း ငှက်ငှက်ငှက် အဟီး စတာ
“ဓာတ်ဆီဈေးတက်တဲ့ ဟာကိုပေါ့ ဘယ်သူတွေက လက်ခံသည်ဖြစ်စေ လက်မခံသည် ဖြစ်စေ ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့လက်ခံနိုင်တယ်...”
လက်ခံရင်တော့ လေသဲပဲ သူကကိုယ်ပိုင်ကားစီးနိုင်လို့ ဒွတ်ခမရောက်ဘူးထင်ပါရဲ့
“ဒီတော့အိမ်းနီးနားချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ လောင်စာပေါက်ဈေးနဲ့ တွက်ပြီးလို သလောက် ရောင်းပေးလိုက်ရင် မှောင်ခိုဈေးကွက်လည်းပျောက် စားသုံးသူလက်ထဲလည်း တိုက်ရိုက်ရောက် တိုင်းပြည်လည်း ၀င်ငွေတိုး ဈေးနှုန်းလည်းတည်ငြိမ်မယ်”
အဲဒါကတော့ ပုံလာလာပြောတိုင်းယုံလို့ ထင်တာပဲ ငှက်ငှက်ငှက် အဲဒါတွေကို မသိတာမှ မဟုတ်တာ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေပါတယ်ဆို တူကလဲ တညိုး
“(၁) အိမ်စီးကားနဲ့ လိုင်းကားတွေ အတွက် ဈေးနှုန်းနှစ်မျိုးပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ နေ့စဉ်ခရီးသွားလာနေကြတဲ့ ကျနော်တို့လိုပြည်သူတွေ အတွက်လည်းအသက်ရူချောင်း တိုင်ပြည်လည်း ၀င်ငွေတိုးပေါ့ ....”
အဲလိုမိုး ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိလဲ ဒီမိုကရေစီ မဆန်လိုက်တာ ခွဲခြားခွဲခြားနဲ့
ချိတ်မချိုးနဲ့ ဆွေးနွေးဆိုလို့ ၀င်လာလျှာရှည်တာပါ (အမြင်မတူတာတော့ တတ်နိုင်ဘူးနော်)
On August 20, 2007 at 2:50 PM နိုင်းနိုင်းစနေ said...
အမြဲလာပါတယ် ကိုဝေသတင်းစာရယ်.. ကော်မန့်နဲ့ဆီပေါက်မှာသာ မအော်ခဲ့မိတာပါ. မြန်မာဘလော့ အခု ၁၀၀ ကျော်ကို လက်လှမ်းမှီသလောက် ၀င်ဝင်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုလေး အဆင်ပြေမလား ဆိုတော့.. ဖားသားလဲ မစားတဲ့အတွက် ဖားက ဖြည်းဖြည်းချင်း နွေးလာတဲ့ ရေကြောင်း သေတာလား.. ဘာကြောင့် သေတာလဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူး..ဟီး.. ဘယ်လိုသေတယ်ဆိုတာ ဖားသေကြီးတွေပဲ သိမှာပေါ့နော်..း)
ဓာတ်ဆီဈေး ဂက်စ်ဈေးတွေ တက်တာကလည်း ဘာကြောင့်ဆိုတာ မသိဘူး။ အိမ်မှာ နွားလှည်းကလွဲလို့ ဆီထည့်ရတယ်ဆိုလို့ ဟင်းကြော်တဲ့ ဒယ်အိုးပဲရှိလို့လေ.. နောက် မီးသွေးနဲ့ ထင်းပဲ သုံးတော့ ဂက်စ်လဲ သိဘူး.. ဟီး..နောက်တာနော်... အမြဲလာလည်ပါတယ်။
On August 20, 2007 at 3:37 PM M.Y. said...
ဓာတ်ဆီဈေး နှစ်မျိုးသတ်မှတ်တာ က ဆေးမြီးတိုနည်းလမ်းပါ။ရေရှည်မှာအလုပ်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ စွမ်းအင်ပို့ (စ)တွေ ဖြစ်တဲ့ ထိုင်း၊တရုတ်၊အိန္ဒိယတို့ ကိုရောင်းစားတဲ့ မြန်မာ့လောင်စာပမာဏတွေကို လာဖတ်စေချင်ပါတယ်။LDC တင်ဟုတ်ရိုးလား ပို့ (စ) မှာလဲ စီးပွားရေးအင်တာပရိုက်(စ)တွေအရှုံးပေါ်အောင်လုပ်လို့ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကျရဲ့ တဲ့အကြောင်းသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။
အရင်တစ်ခါ ဓာတ်ဆီဈေး ၁၅၀၀ တင်လိုက်ထဲက နောက်တစ်ခါ ပြည်ပပေါက်ဈေးအတိုင်းတိုက်ရိုက်တင်တော့မယ်လို့ ကျွန်တော်တွက်ခဲ့ပြီးသားပါ.။ ဦးကျော်ဆန်းလဲအရင်တစ်ခါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အရိပ်အမြွတ်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ခက်တာက မြန်မာပြည်ရဲ့ လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေနဲ့ ထိုင်းကလူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေလဲမတူပါ။
တပြည်လုံးကိုယ်ပိုင်ကားစီးနိုင်တဲ့အချိုးနဲ့ အများပြည်သူ စီးနေတဲ့ယာဉ်အချိုးကအဆမတန်ကွာပါတယ်။ ဆိုပါတော့ တပြည်လုံး၂၀%ပဲကိုယ်ပိုင်ကားစီးနိူင်တယ်လို့ ။
့ပြည်သူတွေသုံးနေရတဲpublic transport ကုန်စည်စီးဆင်းနေတဲ့ ယာဉ်တွေအတွက် ၆၀ကျပ်နဲ့ ဆက်ရောင်းပေးနေရင်လဲ ၈၀% အရှုံးပေါ်နေဦးမှာပါပဲ.
နိူင်ငံစီးပွားရေး ကျဆင်းတဲ့၆၀% ဟာ အစိုးရ အင်တာပရိုက်(စ)တွေ အရှုံးပေါ်နေတာ ကြောင့်ပါ။ အဲဒိထဲမှာဒီဓာတ်ငွေ့ နဲ့ စွမ်းအင်အင်တာပရိုက်(စ) က ပြည်ပပို့ ကုန် ကနေ ၀င်ငွေ အများဆုံးပါ။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထွက်နေတဲ့မြန်မာနိူင်ငံ က၁၀၀% ကို ထိုင်းကိုရောင်းတယ်။ Natural Gas နဲ့Crude Oil တွေ ကို Liquefied Petroleum Gas နဲ့ ဓာတ်ဆီကုန်ချောတွေကို မထုတ်နိူင်တော့ ပြည်ပကနိူင်ငံခြားငွေနဲ့ တင်သွင်းရတယ်။ မြန်မာနိူင်ငံက မိအေးနှစ်ခါနာဖြစ်သွားပြီ.။ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းက ကိုယ်ပိုင်သယံဇာတနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကုန်ချော ထုတ်နိူင်ရမယ်။ ပြည်တွင်းလောင်စာဖူလုံမှ ပြည်ပတင်ပို့ ဖို့စဉ်းစားရမယ်။ ပြည်ပရောင်းလို့ ရတဲ့ဝင်ငွေတွေကလဲပြည်သူ့ လက်ထဲတစ်ကယ်မရောက်ဘူး။အများပြည်သူအတွက်မသုံးဘူး။
ကျွန်တော်တို့ နိူင်ငံမှာ အမြော်အမြင်ရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်သူခေါင်းဆောင် တွေအမြန်လိုအပ်နေပါပြီ။
On August 20, 2007 at 4:19 PM YeKyawAungMDY said...
ဗမာပြည်မှာ နောက်ထပ်ထိုင်းကPTTဓါတ်ငွေ့သိုက်တွေ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူပြည်သားတွေမသုံးရဘူး။ တိုင်းပြည်မှာ လောက်လောက်ငင ဖြန့်ဖြူးပြီးမှ ပိုလျှံလို့ ထုတ်ရောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ အခုဟာ က တိုင်းပြည်မှာ လောက်လောက်ငင မဖြန့်ဖြူးပဲ။ ထွက်သမျှကို ပဲ အပြင်ကို ဒေါ်လာမက်ပြီး၊ (ကိုယ့်ပိုက်ဆံလိုပဲ တိုင်းပြည်ပိုက်ဆံလို့ သူတို့က မမှတ်ကြပါ) ရှိသမျှကို ထုတ်ရောင်းတဲ့ အခါကြတော့၊ ပြည်တွင်းမှာ မလောက်မင တွေ ဖြစ်ကုန်တာပါ။ ကုစားစရာနည်းလမ်းက တစ်နည်းပဲရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ အဖိုးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ လောက်ငအောင် ဖြန့်ဖြူးဖို့ပါပဲ။ နောက်တစ်ခု ပြောချင်တာကတော့ ကျနော် အခုရောက်နေတဲ့ bangkok တစ်ခုလုံး မီးရနေတဲ့ ဟာက ဗမာပြည်က ပေးတဲ့ CNG နဲ့ လည်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ရင်နာဖို့ကောင်းသလဲဆိုတာပါ။
On August 20, 2007 at 4:42 PM နေဘုန်းလတ် said...
ဘာပြန်ပြောရမှန်းကို မသိဘူး …
ဈေးနှုန်းတွေကို နိုင်ငံတကာအတိုင်းတိုးပါတယ်လို့ပြောချင်ရင် … လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ဝင်ငွေကိုလဲ နိုင်ငံတစ်ကာအတိုင်းရကြရဲ့လားဆိုတာကို လေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ လူလိုနားလည်တတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ …
နောက်ပြီး ပြည်သူလူထုကို စာနာထောက်ထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့ …။
On August 20, 2007 at 4:46 PM ကိုငယ် said...
ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကို လက်မခံလို့မှ မရတာ။ မှောင်ခိုဈေးကွက်ရဲ့ အဓိက က ကုန်ပစ္စည်း မလုံလောက်မှုက စတာပါ။ အစိုးရဈေး ၃၀၀၀နဲ့ လိုအပ်တဲ့ ပြည်သူတွေအားလုံးကို ရောင်းပေးနိုင်မလား..
မရောင်းနိုင်ရင် မလုံလောက်ရင် မှောင်ခိုဈေးကွက်က ပေါ်လာဦးမှာပဲ.. အရင်က ၁၅၀၀ မှောင်ခိုဈေးက ၃၂၀၀..အခု ၃၀၀၀ဆိုတော့ မှောင်ခိုဈေးက ဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲ..ဆီဈေးတစ်ခုထဲတင် မဟုတ်ဘူး.. ကုန်ပစ္စည်းတွေ အားလုံးမှာ အစိုးရထုတ်ဈေးဆိုတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ပြည်သူတွေ လောက်ငှအောင် မထုတ်ပေးနိုင်သရွေ့ ဒီပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
On August 21, 2007 at 5:57 PM hninhnin said...
အပေါ်မှာ ပြောသွားကြတာက တော်တော်ကို စုံနေပြီ။ သိုးလေးလည်း အဲဒီလိုပဲ ထင်ပါတယ်။ စာကိုတော့ တော်တော်ဖတ်လိုက်ရတယ်။ မနေ့က နက်ကျလို့၊ ဒီနေ့မှ သေချာဖတ်ရတယ်။ အခုတော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက်လို့ လှုပ်ရှားနေကြတယ်နော်။
On August 21, 2007 at 11:52 PM Mr.Pooh said...
ကိုဝေ - ခင်ဗျားဖို့ Comment ရေးရင်း ရှည်သွားလို့ ကျွန်တော့် အိုအေစစ်မှာ Post အဖြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ လာဖတ်ပါဦး။ ဆွေးနွေးပါဆိုလို့ ဆွေးနွေးထားတယ်ဗျာ။
On August 26, 2007 at 8:52 AM zmg8888 said...
ကျနော့်အီးမေးကိုတခြားလူကပို့လို့ရပြီးခင်ဗျားမှမရရင်တော့ခင်ဗျားကိစ်စပါဘဲ။ ခင်ဗျားအာဘော်နဲ့ကိုဝေညီလေးနဲ့တော်တော်တူလို့ မှားတာဝမ်းနဲပါတယ်၊
ရေနံဈေးဟာဒေါ်လာ၃၀ ကနေ ၇၀ကျော်တက်လာတာမှန်ပါတယ်၊ ရေနံကုန်ပဏီတွေအပြင် ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ်ဆီစက်ဆီကုန်ပဏီတွေတအားချမ်သာလာတယ်၊ ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ဟာ ရေနံက၂၀%လောက်ဘဲရှိတယ်။ ရေနံဈေးတက်လို့ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ်ဈေးတက်ရင်ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ်ထုတ်တဲ့လူတွေချမ်းသာတာပါ၊ (နအဖလဲပါတယ်)
ကဘာ့ဈေးနဲ့ကြည့်ရင် - အမေရိကန်ဟာေ၇နံ၆၀% နိုင်ငံခြားကသွင်းရတယ် ၁ ဂါလံကိုဩဂုတ်၁၄ ရက်ငွေလဲနှုန်းနဲု့၃၈၇၀ကျပ်လောက်နဲ့ရောင်းတယ်၊ ထားပါတော့ဒီနေ့နှုန်းနဲ့ ၆၀၀၀ ထား၊ အမေရိကန်အနဲဆုံးလစာကသိန်း၂၀ ကျော်ရှိတယ်၊ ဒီဆီဈေးကိုသုံးနိုင်တာပေါ့ ဗမာပြည်မှာကတလဂါလံ၆၀ တလကို၁ သိန်း ဂသောင်း ကုန်မယ်၊ ဘာနဲ့သွားစားကြမှာတုံး၊
ကိုဝေ အလုပ်သမားတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေဟာ ဆံဘယ်နှပြည်၊ ဘတ်စ်ကားခဘယ်နှခေါက်၊လုံခြည်ဘယ်နှထည် ၀ယ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုတွက်ပြီးမှ ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ်ဈေးတက်တာကောင်းပါတယ်လို့ပြောပါဗျာ၊